Muuri News Network » ARRAG SAWIRO: Dad kor u dhaafaya 400-qof oo Muqdisho lagu qab qabtay..
ARRAG SAWIRO: Dad kor u dhaafaya 400-qof oo Muqdisho lagu qab qabtay..
Apr 5, 2016 - Comments off
MaleeshiyaadkaDowladda ayaa xalay waxa ay howlgalo dad badan lagu qab qabtay ka sameeyeen Xaafadaha Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir, iyadoo howlgalkaan uu qayb ka yahay howlgalada dar darta ku socda ee ciidamada ay ka wadaan Magaalada Muqdisho.
Ciidamo isugu jira kuwa Nabad Suggida, Booliska iyo Millaterig oo ay wehliyaan Ciidamada Amisom ayaa galay Xaafado ka tirsan Degmada Yaaqshiid oo howlgalkaan ballaaran ciidamada ay ka sameeyeen, kadibna ciidanka ayaa soo aruuriyay dhalinyaro badan.
Howlgalka wuxuu biloowday xalay 8:00 Fiidnimo sida uu sheegay Afhayeenka Wasaarada Amniga C/kaamil Macalin oo la hadlay Warbaahinta, iyadoo dadkii la soo qabtay ciidamada ay ku sameeyeen kala saarid.
Xalay 8:00 Fiidnimo ilaa 5:00 Aroornimo ayaa howlgalo ay sameynaayeen Hay’adda Nabad Suggida Qaranka oo ay wehliyeen Ciidanka Amisom, ayaa howlgal waxa ay ka sameeyeen Degmada Yaaqshiid, gaar ahaan Xaafada Coca Cola, halkaasi oo ciidanka ay u aadeen macluumaad ku aadan inay jiraan dad Diyaarinaayay qaraxyo, Meeshaasi waxaa laga soo qabtay dad gaaraya 500 oo ruux, dadkaasi Baaritaan ayaa la mariyay 11 qof ayaa si gooni ah loo soo watay, Baaritaankoodana waa uu socdaa.” Ayuu yiri Afhayeenka Wasaarada Amniga.